ट्राफिकले घुस खाए भन्दै ‘पिडित’ हाम्रो अफिसमा , पोखरामा इन्जोय जोनको बास्तबिकता के हो ? मन्त्री संग सिधा सवाल (भिडियो सहीत) - Nepali Mato
२८ बैशाख २०७६, शनिबार १३:०८ May 11, 2019 Nepali MatoLeaveaComment on ट्राफिकले घुस खाए भन्दै ‘पिडित’ हाम्रो अफिसमा , पोखरामा इन्जोय जोनको बास्तबिकता के हो ? मन्त्री संग सिधा सवाल (भिडियो सहीत)
गण्डकी टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम गण्डकी छड्केले २ हप्ता अगाडी पोखराको छोरेपाटनमा रहेको प्रहरी चौकीमा कार्यरत केही प्रहरीले चेकिङ भन्दै अबैध रुपमा पैसा उठाउने गरेको तथ्य सप्रमाण पेश गरेको थियो । कार्यक्रम प्रसारण भएपछी त्यहाका २ जना प्रहरी निलम्बनमा परे । अन्यलाई पनि कारवाही भयो ।
तर अचम्म के भने, दुई हप्ता पछी फेरी ट्राफिक प्रहरीले घुस खाए भन्दै ‘पिडित’ गण्डकी टेलिभिजनको कार्यालयमा आइपुगे । घुस खाएको आरोप लागेका ट्राफिक प्रहरी मिडियामा बोल्न मानेनन । त्यसपछी यसको जवाफ जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पोखराका प्रमुख मुरारी मिश्र संग मागिएको छ । गण्डकी छड्केको आजकै श्रृखलामा पोखरामा प्रदेश सरकारले बनाउने भनेको बिबादीत ‘इन्जोय जोन’ को बास्तबिकता बुझ्ने प्रयास गरीएको छ ।
प्रदेश सरकारले इन्जोय जोनको नाममा रेड लाइट एरिया खोल्न लागेको भनी सामाजिक संजालमा यसको ब्यापक बिरोध र समर्थनका बहसहरु भैरहेका छन । इन्जोय जोन के हो ? के अब साच्चै पोखरामा खुल्लम खुल्ला यौन धन्दा हुदैछ ? उद्योग, पर्यटन, बन तथा बाताबरण मन्त्री बिकास लम्साल संग सिधा सवाल गरीएको छ । गण्डकी छड्केको यस हप्ताको नया श्रृखला तलको भिडियोमा हेर्नुहोस :
अबको तीन दिन देशैभरि हुरीबतास र चट्याङसहित पार्नी पर्ने सम्भावना
१९ श्रावण २०७६, आईतवार १८:१२ August 4, 2019 Nepali Mato
सडक मन्त्री के.पी खनाल:प्रिय बाजुरा -तिम्रो आगनमा एक जिम्मेवारी सुम्पिन आउदैछु।
२३ माघ २०७५, बुधबार १२:२५ February 6, 2019 Nepali Mato
२२ श्रावण २०७६, बुधबार १९:४९ August 7, 2019 Nepali Mato
अनुहार बुढो देखाउने एप प्रयोग नगर्न विशेषज्ञहरुको सुझाव,किन त ? जानकारीको लागी शेयर गरौ ।
१ श्रावण २०७६, बुधबार २१:३२ July 17, 2019 Nepali Mato